Fampiharana 5 hamoronana lalao amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Fampiharana 5 hamoronana lalao amin'ny Linux
Mitaraina foana izahay fa somary mahantra ny fizarana lalao video Linux, indrindra noho ny tsy fisian'ny lohateny teratany izay mbola legiona amin'ny Windows. Na dia afaka mankafy ny fivoaran'ny Windows aza izahay noho ny divay na Cedega, dia te hanana lalao teratany bebe kokoa amin'ny Linux izahay.
1. Mpamorona lalao 8
Ity rindranasa Windows ity dia azo ampiasaina amin'ny Linux eo ambanin'ny divay ary tena mahaliana ho an'ireo izay tsy zatra fandaharana, ary raha te hanana lalao video hazakazaka, RPG na lalao video ianao dia azonao atao amin'ny Game Maker 8. Amin'ny ofisialy tranokala dia misy andiana fampianarana sy loharano manampy anao amin'ny lahasa, ary misy koa vondron'olona mpampiasa izay tena te hanampy anao. Toa tsotra ny interface interface, ary rehefa zatra azy ireo ianao dia afaka manomboka manao ny dingana voalohany amin'ny fiteny fandaharana tsotra sy manokana ho an'ity fampiharana fizarana maimaimpoana ity. Mampalahelo fa tsy fampiharana Linux "madio" io.
OHRRPGCE (Engine Hamster Republic Role Playing Game Greation Engine, lava loatra ny lohateny) dia Open Source suite ho an'ny famolavolana lalao video izay natao voalohany hamoronana lalao amin'ny karazana RPG amin'ny 2D. Azonao atao ny mampiasa ny fitenin'ilay rindrambaiko manokana, antsoina hoe HamsterSpeak, na dia azo atao koa aza ny mampivelatra lalao nefa tsy manisy tsipika kaody.
3. Mpanonta lalao
Ity dia sehatry ny lalao Open Source tena malaza izay tsy mamela antsika hamorona lalao irery, fa afaka mandray fivoarana teo aloha ihany koa izay natao tamin'ity sehatra ity ary manova ny kaody mba hampifanaraka azy amin'ny filantsika. Tsotra ny interface ary manana làlan-kaleha ambany ny fianarany, ary tsy vitan'ny hoe mandroso lalao ho an'ny PC sy solosaina finday ihany koa, fa ho an'ny telefaona finday ihany koa.
Ao amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany dia nasehon'izy ireo fa ity no sehatra iantsoana raha ny fahatsorana no zava-dehibe aminao. EyeGameMaker kinova 0.1 dia azo alaina izao ary ilaina ny fisoratana anarana amin'ny tranokala sploder.com hahafahana mitahiry ny lalao.
Araka ny lazain'ny anarany, ity sehatra fampiroboroboana lalao ity dia mikendry ireo mpandahatra programa miaraka amin'ny traikefa Python, na dia azonao atao aza ny manomboka mampiasa PyGame hanombohana lalao amin'ny Linux, indrindra satria Python dia fiteny tsotra kokoa ianarana noho ny C na C ++. Ny mpamorona aza dia manome alalana amin'ny boky an-tserasera maimaimpoana hianarana ny tsiambaratelo rehetra, ary PyGame koa dia manome dingana iray hafa ho an'ireo izay maniry hamorona lohateny somary sarotra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fampiharana 5 hamoronana lalao amin'ny Linux